Asa Vaovao Tsy Manahirana Loatra Ho An’ilay Rosiana Minisitry Ny Fiarovana Voaroaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2013 12:34 GMT
Serdyukov, Ministry ny Fiarovana teo aloha. dikasary YouTube
Tamin'ny herinandro lasa, nanambara i Anatoly Serdyukov, Minisitra teo aloha nisahana ny Fiarovana, fa hisahana ny toeran'ny talen'ny rantsan'ilay orinasam-panjakana. Noraisina ho toy ny zava-tsy nampoizina ilay fanambaràna noho ny fanesorana an'i Serdyukov tsy ho Minisitry ny Fiarovana diso nankalazaina be ho fanta-bahoaka tamin'ny Novambra 2012. Noroahana izy taorian'ny nahitàna hosoka avo lenta nahenika ny firenena mikasika ireo fifanarahana tamin'ny Oboronservice momba ireo tranom-panjakana nampiasain'ny fiarovana. Ny honohono nandeha dia hoe teo i Serdyukov rehefa nanao be midina tany amin'ny trano fonenan'ny lefiny, Elena Vasilyeva, ireo mpanao fanadihadiana — voalaza fa mpifankatia izy roa ireo. Mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika ny hosoka nataon'ny Oboronservice.
Taminà hatsikana somary marikivy ihany no nanehoan'ireo Rosiana bilaogera ny heviny tamin'ilay vaovao mikasika ny fanendrena vaovao azon'i Serdyukov fotoana fohy monja taorian'ny nidarabohany, sady mbola voafatotry ny fanadihadiana koa. Vlad Shurigin, bilaogera ao amin'ny LiveJournal, dia nanesoeso [ru] ny asa fahiny notanan'i Serdyukov tamin'ny naha-mpamatsy kojakojan-tokantrano azy sy ilay voalaza ho asany amin'ny hoavy amin'ny fitantànana orinasa iray mpamokatra fitaovam-pambolena.
Izay izany, niala tamin'ny “Anatole ilay seza” lery ary lasa “Anatole ilay mpamily traktera”
Others mockedNy sasany nanesoeso an'i Vasilyeva, izay iharan'ny fandraràna tsy hivoaka ny tranony satria mbola mitohy ny fanadihadiana. Vladimir Soloviev nibitsika hoe :
dia izay izany e, izany no izy. Isaorana betsaka ianao. Mandrana mitàna toerana mpitantana ambony iray hafa indray i Serdyukov. Tsy ho vavolombelona intsony izy izany! Tale izy ankehitriny!!! i Vasilyeva ve no ho lefitra?
Ilya Yashin, bilaogera avy amin'ny fanoherana, no nampahatsiahy ireo mpamakiny ireo fampanantenan'ny filoha Poutine hiady amin'ny kolikoly ao anatin'ny fitantanany :
Nandray fepetra henjana i Poutine. Niafara tamin'ny fanendrena an'i Serdyukov ho aminà toerana iray vaovao ny ady amin'ny kolikoly tao amin'ny Ministeran'ny Fiarovana. #PartyOfCrooks (#antokom-pisandoka)
Ao amin'ny pejiny Facebook, i Aydar Muzhdabaev, mpanao gazety, dia nanamarika [ru] hoe raha tsy raisina ireo tombantombana iraisan'ny maro amin'ny maha-ao ambadik'ilay kolikoly azy, dia vavolombelona fotsiny i Serdyukov amin'ny raharaha hosoka nataon'ny Oboronservice — fa tsy olona ahiana.
Amin'ny ankapobeny anefa, mitondra sary ratsy ho an'i Rosia ilay raharaha manontolo, hoy ny eritreritr'i [ru] Mikhail Belaev, bilaogera :
Hainareo ihany, tsy henatra ho an'ny governemantantsika akory izany. Fanaovana tsinontsinona ny firenena iray manontolo io. Fanaovana tsinontsinona eny imasom-bahoaka ny tsirairay amintsika.Sady koa filazana mivantana avy amin'i Kremlin fa tsy misy lalàna mamatotra ny sarangan'”Andriamanitra” misy azy ireo […] Ny tantaran'ny fanafahana tamin'ny fomba mahagaga an'i Serdyukov tamin'ny raharahana heloka bevava nahazo azy taorian'ny tantara ratsy mikasika kolikoly sy ny fiverenany mandray raharaham-bahoaka dia fanamafisana mivantana an'io.
Mety mbola hitondra ho any aminà hadisoam-panantenana misimisy kokoa i Belaev. Ny raharahan'ny hosoka nataon'ny Oboronservice dia mahavoarohirohy olona bebe kokoa noho ireo efa iharan'ny fanadihadiana ankehitriny. Mandritra izany fotoana izany, tsy tena naneho fiaraha-miasa feno [ru] tamin'ny Kaomity Mpanadihady ao Rosia i Serdyukov, zavatra iray izay tena nahatezitra mafy azy ireo. Valim-pitia ho amin'ny fahanginany ve ny fanendrena azy tsy nampoizina io?
17 ora izayRosia